200% Terms and Conditions Bonus | FXCC
200% Fehezandalàna mifehy ny Bonus
Home / 200% Fehezandalàna mifehy ny Bonus
FXCC 200% Fidirana Bonus Terms & Conditions (Niala aina)
Manaiky ianao fa amin'ny fandraisana anjara amin'ity fanolorana ity ("Fanolorana"), dia ho voafatotr'ireo fepetra sy fepetra ("Terms") sy ny fepetra ankapobeny izay ampiharina amin'ny kaontinao ara-barotra. Tokony hamaky tsara ireo fepetra ireo ianao ary hamantatra tsara ny tenanao mety famborahana Mariho.
Mpikambana nahazo alalana:
Mpiera vaovao sy efa misy ankehitriny ao amin'ny FXCC. (Tompon'ny kaonty fenitra na XL) izay misafidy ny hisafidy handray anjara amin'ny Tolotra amin'ny fanamafisana mazava ny fanapahan-keviny amin'ny fandefasana fangatahana amin'ny alàlan'ny mailaka financial@fxcc.net.
Mpikambana tsy mandray anjara amin'ny fampiroboroboana hafa amin'ny FXCC.
Leverage: Ny fampiasam-bola be indrindra amin'ny fampiroboroboana dia ny 1: 100
Fananana azo antoka: Vola fampidirana vola manampy vola vaovao amin'ny kitapom-bolan'ny mpanjifa mendrika amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola natolotry ny FXCC ary namindra tao amin'ny kaontin'ny mpivarotra Eligible Client avy eo. Ny fanitsiana ny fandanjalanjana, ny fanesorana ny fifandanjana misy ary ny fandefasana azy indray, tsy heverina ho fandaniam-bola vaovao ny fanavaozana na ny mpisolovava fampidirana / mpiara-miasa.
200% Deposit Bonus: Ho an'ny tahiry azo apetraka isaky ny kaonty mendrika amin'ny alàlan'ny kaonty misy azy miaraka amin'ny FXCC mandritra ny vanim-potoana fampiroboroboana ny klioba mendrika dia mahazo 200% Deposit Bonus ao anatin'ny efatra amby roapolo (24) ora fiasana aorian'ny fanamboarana ny vola. (Ny fidiram-bola kely indrindra dia iharan'ny karazana kaonty sy ny fepetra)
Vola be indrindra amin'ny Bonus tanteraka: The indrindra ny ankamaroan'ny Bonus rehetra neken'ny FXCC ho an'ny mpanjifa manan-kery manokana amin'ny fotoana rehetra dia tsy mihoatra ny totalin'ny $ 10,000 US (na mitovy).
Ny mpanjifa 'A' dia nametraka vola vaovao $ 1,500 ▶ Ny mpividy 'A' dia hahazo ny fampindramam-bola $ 3,000 ho 200% Deposit Bonus; Ity bonus ity dia hisaintsaina ny kaontin'ny mpanjifa toy izao manaraka izao:
Mila mahay mandanjalanja ny hitsiny Vidiny (Bonus available) Mahazo (Free) Margin
Avy eo, ny mpanjifa 'A' dia nametraka vola hafa $ 2,000 ▶ Ny mpividy 'A' dia hahazo ny fampindramam-bola $ 4,000 amin'ny 200% Deposit Bonus
Ity bonus ity dia hisaintsaina ny kaontin'ny mpanjifa toy izao manaraka izao:
Ny client 'B' dia nametraka vola vaovao $ 3,000 ▶ Ny mpividy 'B' dia hahazo ny fampindramam-bola $ 6,000 ho 200% Deposit Bonus. Ity bonus ity dia hisaintsaina ny kaontin'ny mpanjifa toy izao manaraka izao:
Avy eo, ny Client 'B' dia nametraka vola iray hafa amin'ny $ 2,500 ▶ Ny 'B' mpividy 'B' dia mahazo $ 500 fanampiny fanampiny satria ny fetra farafaharatsiny ho an'ny bonus dia $ 4,000 Ity soso-kevitra ity dia hisaintsaina ny kaonty Client toy izao:
Ny totalim-bola ankapobeny Max Sum dia tsy mihoatra ny $ 10,000
Ny FXCC dia miaro ny zo handao ny fangatahana Bonus amin'ny fomba tokana ihany, tsy mila ny fanamarinana na fanazavana ny anton'izany fihenana izany.
Ny bonus dia ampidirina amin'ny kaonty ara-kaontin'ny Mpifanaraka izay mendrika ho azo antoka, The Bonus dia voatendry ho an'ny tanjona ara-barotra ary tsy ho very.
Miala amin'ny kaontin'ny mpivarotra Eligible Client sy / na ny famindrana anatiny avy amin'ny kaontin'ny varotra an'i Eligible Client ho ao amin'ny Wallet azy, dia hanao ny Bonus ho nofoanana tanteraka ary esorina tanteraka.
Ny Client 'C' dia manana fifandanjana manaraka ao amin'ny kaontiny:
Ny mpanjifa 'C' dia nangataka ny fanesorana $ 1,000 ▶ bonus azo dia ho nofoanana tanteraka ary esorina tanteraka.
Izany dia hisaintsaina ny kaontin'ny mpanjifa toy izao manaraka izao:
Nangataka ny hanaisotra ny vola feno (2,500 XNUMX dolara) ny mpanjifa 'C' ▶ voaray dia ho nofoanana tanteraka ary esorina tanteraka.
Cashback: Ny Credits Bonus dia hipetraka amin'ny toerana iray ary hiverina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fialan-tsasatra miala aorian'ny fanakatonana ny varotra tsirairay na inona na inona ny sandan'ny varotra sy ny paragrafy (11) eto ambany.
Ny famonoana ny anjaran'ny fivoaran'ny 1 ho an'ny serivisy dia hamindra ny habeny $1.0 (na mitovy) avy amin'ny Credit Bonus mba hialana sasatra
Ny mpanjifa 'D' dia manana fifandanjana manaraka ao amin'ny kaontiny momba ny varotra:
Ny Client 'D' dia nanao varotra tanteraka ny 1 Standard standard EURUSD (izany hoe misokatra sy mihidy), miaraka amin'ny tombony amin'ny $ 100 ▶ Ity manaraka ity dia misy fanampiny roa ao anatin'ny tantara momba ny kaonty:
Mivoaka - $ 1.0 (ie ny sandan'ny bonus dia nesorina amin'ny Credit)
Bonus Deposit $ 1.0 ( Izany hoe ny volan'ny bonus dia miova ho vola tena izy ary manampy amin'ny balan'ny kaonty). Ary nipoitra avy amin'ny balim-balala toy izao manaraka izao:
Ny Credit Bonus dia azo ampiasaina ho toy ny fivarotana varotra ary ho hita eo amin'ny kaontin'ny varotra Kalandrie 50 androany satria ny daty nahazoana ny Bonus ("vanim-potoana azo ekena"). Aorian'io daty io, ny fialan-tsasatra Bonus sisa rehetra dia hesorina amin'ny kaonty.
Amin'ity vanim-potoana azo atao ity raha toa ka mandanjalanja mitovy na ambany ny 30% amin'ny tahirim-bola ankapobeny ny kaontin'ny kaontin'ny mpifindra monina (tafiditra ao anatin'izany ny fandaniana sy ny fahavitrihan'ny zana-bola) (raha lazaina amin'ny teny hafa: mitovy ny tahan'ny kaonty mitovy na ambany ny 130% bola), ny volavolan-dalàna Bonus azo alaina dia alaina (alaina), voatahiry ao amin'ny "Accounts Saving" tsirairay ary hampiasaina hamoahana ilay mpanjifa manan-kery voalaza etsy ambony ho an'ny fividianana fanampiny novonoina miaraka amin'ny fandoavam-bola sisa tavela amin'io kaonty io paragrafy 10 mandra-pahatapitry ny vanim-potoana azo atao.
- 30% avy amin'ny Bonus (credit) ampiasaina = $ 600
Raha mieritreritra ny mpanjifa 'D' dia manana varotra misokatra 1 lot EURUSD miaraka amin'ny fatiantoka mitentina 400 $ ankehitriny, midika izany ▶ Balance + Tombom-barotra sy fatiantoka mitsingevana = $ 1,000 - $ 400 = $ 600
Amin'ity tranga ity dia hoesorina ny bonus ary hisaintsaina ny kaonty toy izao manaraka izao:
$1,000 $600 $0 Tsy misy mari-pototra
Ho an'ny fandaniana amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy mandritra ny vanim-potoana azo atao, ny Client dia handray ny tahiry $ 1.0 isam-bolana izay hialana amin'ny kaonty savings.
- Noho ny tsy fahampian'ny tsenan'ny toeram-pivarotana izay mety mitohy, mety tsy azo atao foana ny manala ny Bonus (bola) amin'ny 30%.
- Ny ambaratongam-piantsenana maromaro dia hijanona amin'ny fotoana rehetra, na inona na inona raha toa ka mbola ao amin'ny kaonty mpanjifa foana ilay izy na tsia.
Ny FXCC dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fiantsoana na ny fatiantoka mety hitranga amin'ny mpividy, ary anisan'izany ny famoizana noho ny fihenan'ny vidim-piainana, raha toa ka nesorina ny Bonus noho ny antony rehetra mifanaraka amin'ny fepetra sy fepetra voalaza ao.
Ny endriky ny fanodikodinam-bola na ny endrika hafa misy ny famitahana na ny fanaovana hosoka amin'ny kaonty ara-barotra mpanjifa na raha misy ifandraisany na mifandray amin'ny Bonus Credit dia hanafoana ireo mpanjifa Bonus rehetra.
Ny FXCC dia mitazona ny zo, satria izy irery no mihevitra fa mety, hanova, hanitsy, hampiato, hanafoana na hamarana ny tolotra, na ny lafiny rehetra amin'ny Tolotra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny alalan'ny fanamarihanao amin'ny mailaka anatiny amin'ny alàlan'ny "Online Trading System" na amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny fametrahana fampandrenesana ao amin'ny tranokalanay. Miezaka manome anao telo minitra (3) andro farafahakeliny ny tatitra momba ny fanitsiana tahaka izany raha tsy hoe tsy mahomby firy ho antsika izany.
Ity tolotra ity dia nalamina ary nokarakarain'ny Central Clearing Ltd, Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu ary azo alaina ho an'ny mpanjifa mipetraka ao amin'ny Fitsipika tsy Eropeana.
Ny mpividy dia tokony hitantana ny kaonty ara-barotra mifanaraka amin'ny toetr'izy ireo. Ny tolotra fampahafantarana dia tsy natao hanovana na hanova ny safidin'ny mpifanaraka amin'ny mpanjifa na hampirisika ny mpanjifa hivarotra amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny paikady fampiasam-bola.
Ny vokatra FXCC dia natao tsikelikely, izay mitondra risika avo lenta ary mety tsy mety ho an'ny mpanjifa rehetra. Alohan'ny hanapahana ny varotra FXCC vokatra, tokony handinika tsara ny tanjona amin'ny fampiasam-bola, ny traikefa niainana, ary ny fialamboliny. Azo atao ny manohana betsaka kokoa noho ny fampiasanao voalohany. Ny mpividy dia tsy tokony hanalavitra ny fomba amam-panaovan'ny mpivarotra mba hahafeno ny fepetra ara-barotra faran'izay ambany ao anatin'ny fepetra sy fepetra.
Ny tsy fanatanterahana ireo fepetra sy fepetra ireo dia mety hahatonga ny mpanjifa ho tsy azo ekena amin'ny tolotra. Na izany aza, tsy misy fiantraikany amin'ny fahaiza-manaon'ny mpanjifa ny varotra amin'ny sehatra fifanakalozana FXCC ary tsy mampiharihary ny mpanjifa amin'ny fitomboan'ny risika na ny fiparitahan'ny tsena.
Ireo fepetra sy fepetra rehetra dia tsy mamoaka ny risika rehetra mifandraika amin'ny fampiasana ny vokatra FXCC. Ny mpividy dia tokony mamerina mijery akaiky ny FXCC Account Agreement and Risk Declaration Statement manontolo andro alohan'ny fanapahan-kevitra hanokatra kaonty momba ny FXCC ary hevero ny loza mety hipoitra eo amin'ny tanjona manokana amin'ny fampiasam-bola manokana sy ny toe-bola ara-bola mba hamaritana raha mety ho fampiasam-bola izany. Ny fampiharana ny fifanarahana sy ny risika dia hita ao amin'ny tranonkala FXCC ao www.fxcc.com
(Dikan-teny 2.1 - Vaovao farany: Aprily 2020)